Xildhibaan Ilhaan Cumar oo si weyn loogu Soo Dhaweeyey magaalada Qardho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo si weyn loogu Soo Dhaweeyey magaalada Qardho[Sawirro]
QARDHO – Waxaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Xildhibaan Ilhaan Cumar oo Xisbiga Dimoqraadiga looga soo doortay gobolka Minneasota ee dalka Mareykanka.
Soo dhaweynta ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka gobolka kan degmada,dadweyne aad u farabadan iyo mas’uuliyiin ka tirsan Puntland iyo Xildhibaano,waxaana looga hortagay meel dhowr KMG dhanka koonfureed uga beegan Qardho.
Duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan ayaa Xildhibaanada iyo Seygeeda uga mahadceliyey booqashada ay ku yimaadeen magaalada Qardho.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo la hadashay dadweynihii soo dhaweeyey ayaa xustay dareenkeeda farxadeed maanta aan lasoo koobi karin oo ay ku faraxsantahay booqashada ay ku timid magaalada Qardho.
Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale booqasho ku tasty xarunta Agoomaha magaalada Qardho ee Daarul-Xannaan halkaasoo ay wax ku bartaan ku dhawaan 500 arday oo agoon ah,waxayna sidoo kale booqatay Isbitaalka guud ee magaalada.
Kaddib kulan qado sharaf ayey la qaadatay Odayaasha maamulka degmada iyo Waxgaradka magaalada,waxaana hadalo soo dhaweyn iyo duco kasoo jeediyey Wasiirka Maaliyadda Puntland Cabdullaahi Shiikh Axmed,Guddoomiyaha gobolka Cabdiqaadi Siciid Caarshe(Dhaqaaje) iyo mas’uuliyiin kale.
Xildhibaan Ilhaan Cumar iyo wafdigii ay hoggaamineysay ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.